I-Mini French Bulldog: Ama-10 Amaqiniso amahle Ubungawazi - Izinhlobo
IBulldog yaseFrance iyinzalo ebukekayo, kepha kuthiwani uma konke lokhu kuhlanganiswe njengenja encane?
IBulldog encane yaseFrance isinikeza uhlobo olusindayo lwamabhonasi emzimbeni omncane kakhulu ngenkathi uphethe zonke izici ezifiselekayo nezihehayo zeFulldog yaseFrance esezingeni elijwayelekile.
Ithanda kakhulu futhi ihamba kalula, iBulldog encane yaseFrance yenza ukwengeza okuhle kunoma yimuphi umndeni.
Lo mdlwane uvumelana nezimo kakhulu, okusho ukuthi noma ngubani angaba ngumnikazi walolu hlobo, njengoba efanele zonke izinhlobo zamakhaya!
Ngenhlanhla izidingo zabo zokuzivocavoca zikhawulelwe, ikakhulu ngenxa yobukhulu bazo obuncane, kepha yini enye okufanele uyazi ngalolu hlobo?
Ake sabelane nawe ngezinto eziyi-10 wonke umthandi wezinja okufanele azi ngalokhu okuthandekayo nokuncane okuncane ...
10. ILady Gaga Iphethe i-Mini French Bulldog
9. Kumele Zibe Zincane Kunama-intshi Ayishumi Nantathu Ngokuphakama
8. I-Mini French Bulldog Ihlupheka Ngenxa Yokukhathala Kokushisa
7. Le Breed Isilwane Esihle Kakhulu Somndeni
6. IM Mini French Bulldog Inezinkinga Zokuphefumula
5. Laba Pooki Bangabahlali Bamadolobha!
4. I-Mini French Bulldog Izindleko ezisuka ku- $ 2,000 ziye ku- $ 8,000 USD
3. Banenkani KAKHULU
2. Zidinga Ukuzilolonga Okuncane Nokuzivocavoca
1. IM Mini French Bulldog ayaziwa ngokusemthethweni yi-AKC
Ukuthandwa kwalolu hlobo kugcizelelwa ukuthandwa kwabo phakathi kosaziwayo abango-A.
Abanikazi bosaziwayo bale nja bahlanganisa: uLady Gaga, uDwayne “The Rock” Johnson, uLeonardo DiCaprio noChrissy Teigen onobuhlakani!
Ngisho noMartha Stewart unothando ngamaFulldogs akhe aseFrance.
Ngesimo sabo sosaziwayo, akumangalisi ukuthi isidingo seMini French Bulldog sisukile!
Ukuhlonza i-French Bulldog encane kulula, vele ubheke inguqulo encane ye- iFulldog yaseFrance esevele iyathandeka .
Njengengxenye ye- umndeni wakwaBulldog , i-mini Frenchie ibukeka ngokugqamile ngomzimba ohlangene nowemisipha ngenkathi igcwele kakhulu.
Njengoba i-mini French Bulldog kungesilo uhlobo olusemthethweni azikho iziqondiso ezithile zosayizi .
Kodwa-ke, okungenani, kumele babe bancane kunezingane zakubo zaseFrance Bulldog ngokufinyelela ubude obungamayintshi ayi-13 ukuphakama nesisindo esiphezulu samakhilogremu angama-28.
Zinezindlebe ezinkulu ezifana nezilulwane, eziqondile futhi ezihlala phezulu kwekhanda lazo, futhi amehlo azo amakhulu ayindilinga enza kube nzima ukungavumeli inkani yazo ithathe izintambo.
Isifonyo sabo esifushane kunezela ekubukekeni kwabo okuhle kepha ingathwala okwezempilo yayo (bheka iqiniso 6 ngezansi).
Umbala wejazi walolu hlobo ufana nabazala babo abajwayelekile, kufaka phakathi:
Fawn Mhlophe Okumpunga
Mnyama Brindle Okumhlophe nethani
Okumhlophe nokumnyama Okumpunga nokumhlophe
Kokubili amaFrenchies amancane namaphakathi ajwayelekile ahlukile futhi adumile ekubukekeni kwawo okwenza kube lula kakhulu ukubona .
Ngokungafani nezinye izinhlobo zezinja, azidingi imisebenzi eminingi yengqondo noma yomzimba. Eqinisweni, bajabule kakhulu ngokuba ohlangothini lwakho lokukhahlela ohlangothini ngosuku.
Uma ufuna umlingani wokuqina noma osebenza naye, i-French Bulldog encane kungenzeka ingabi uhlobo lwakho.
Lokhu uhlobo luzwela ekukhathaleni kokushisa nokuvivinya umzimba kubangele ukuwa.
Ngokwengxenye, lokhu kungahle kube ngenxa yesifonyo sabo esifushane nokugeleza okuphefumulayo okungasebenzi kahle.
Noma ngabe iyini imbangela, le nja iyashesha ukuzikhandla ngesikhathi sokudlala esinamandla noma ngokugijima okude, futhi ikulungele kakhulu ukuhamba imizuzu engu-20 kuye kwengu-30 ngosuku.
Uma ubona uFrenchie wakho omncane ephefumulela phezulu kakhulu, noma eshesha kakhulu, zama ukuthatha ikhefu noma unciphise izinto phansi.
Banobuntu obunothando, eceleni kokudlala kwabo, okusho ukuthi bangenza abangane abakhulu bemindeni enezingane.
Lolu hlobo luvame ukuzwana nezinye izilwane ezifuywayo nezomndeni.
Noma kunjalo, bane-drive yempango , ngakho-ke kwaziwa ukuxosha amakati noma onogwaja. Inkani yabo ingenza kube nzima ukukhahlela lomkhuba!
Uma kukhulunywa ngezinye izinja, uma zihlangana nabantu zisencane, asikho isizathu sokuthi kungani uFrenchie wakho engakwazi ukuba abangane abahle namanye amalungu omndeni we-canine.
Ukuzijabulisa komphakathi kuhamba ibanga elide kunoma iyiphi inja endala. Kufanele ugcine umdlwane wakho uhlalisana kahle ukuze uqiniseke ukuthi akhula abe yi-canine enesimilo futhi enesimilo.
I-mini French Bulldog iyinjabulo yokwengeza futhi ethanda ukudlala i-canine .
Ngenxa yobuntu babo obunobungane (nosayizi omncane) okuncane akuyona inja enkulu yokuqapha. Bangakuxwayisa ngezivakashi nabantu ongabazi, kepha basheshe bafudumale kubantu futhi ukukhonkotha okungaguquguquki akufanele kube yinkinga.
Umlomo omfushane we-mini French Bulldog ungabukeka umuhle, kepha-ke, kuza nezinkinga zezempilo.
I-Brachycephalic Airway Syndrome kubangelwa umhlathi omfushane nekhala leFulldog yaseFrance.
Ngenkathi isakhiwo sethambo okuholela emgudwini wokuphefumula kufinyeziwe , inani lezicubu ezithambile lihlala lilingana.
Lezi zicubu bese zihlukaniswa zibe nezikhala ezinqunyelwe okubangela ukuphazamiseka emoyeni kanye nokuphefumula okunenkinga.
Yilesi sicubu esifanayo esizodala ukuthi le nzalo encane isnuze futhi ihoxe. Kodwa-ke, iBrachycephalic Airway Syndrome ingaba yimbi kakhulu, idale ukungaphatheki kahle, usizi ngisho nokufa.
Ukucindezeleka okuqhubekayo kokuphefumula kuzoba nomthelela enhlalakahleni yenja yakho futhi kuyinqande ngesikhathi sokudlala nokuzivocavoca umzimba (bona iqiniso 7 ngenhla).
Lokhu kukhubazeka okuzuzwe njengefa futhi kungabonakala kuningi lama-Bulldogs amancane aseFrance, noma kunjalo, ubunzima becala ngalinye bungahluka.
Zifanele izimo eziningi zokuphila ezahlukene, lokhu kukuwe ngokuphelele!
Usayizi wabo omncane, nezidingo ezinomkhawulo zokunakekelwa, kubenza babe abangane abaphathekayo nabazivumelanisa nezimo.
I-mini French Bulldog ingumngane ozivumelanisa nezimo kakhulu , ongadingi igceke elikhulu elingemuva futhi ongagcinwa kalula ekhaya elincane.
Ngoba bangakwazi ukuzivumelanisa kalula nezilungiselelo zasemaphandleni noma ngisho nokuhlala ngesitayela sefulethi, bavame ukubonwa njengomhlali wedolobha futhi ungabona iFrenchie izula imigwaqo yaseNew York!
Lolu hlobo ngumngane onothando ngokweqile futhi oqotho.
Bathanda ukunakwa ngokuphelele, ikakhulukazi abanikazi babo kanye ne-mini French Bulldog ingaba yi-charmer impela. Kepha ngenxa yalokhu, banenani elikhulu lentengo.
Le yinja enhle ebusuku kakhulu ngomlilo futhi yaziwa ngokulandela umnikazi wayo endlini.
Inqobo nje uma ubanika ukunakwa nothando lapho-ke bangama-canine ajabule futhi athanda ubumnandi.
Lolu wuhlobo olungenzi kahle ngokwalo isikhathi eside .
Banothando olukhulu futhi lokhu kusho ukuthi isikhathi esiningi kude nabathandekayo babo kungaholela ekuziphatheni okuyinkinga njengokungahlaliseki noma nokukhathazeka ngokwehlukana.
Inkulisa yenja nayo iyisixazululo esihle kulabo abasebenza izinsuku ezinde. Kodwa-ke, uma umsebenzi wakho udinga isikhathi esingekude futhi uhambe lapho-ke lokhu kungenzeka kungabi uhlobo olufanele wena.
Kokubili i-French Bulldog ne-mini French Bulldog bayaziwa ukuthi banenkani enenkani.
Le ndlela encane enenkani ingahle ihlekise, kepha kungasho ukuthi ukuyiqeqesha kungadinga isikhathi esithe xaxa, umzamo nokubekezela!
Iseluleko sethu ukuthi gcina ukuqeqeshwa kufushane, kumnandi futhi kumnandi .
Lapho umdlwane wakho uthola isithukuthezi ngokwengeziwe, kulapho bezoqina ngokwengeziwe lapho belalela!
Namathela kuphela kuzindlela ezinhle zokuqinisa. Dumisa, uklomelise futhi udumise futhi, yenza i-pooch yakho yazi ukuthi benza umsebenzi omuhle ngokuthokoza, ukuncoma kanye nokuphatha okunempilo.
Ziyaziwa ukuthi ziluhlobo olukhuthazayo lokudla.
Ijazi labo lifana nelohlobo lomzali wabo, iFulldog yaseFrance. Lokhu kusho ukuthi ijazi labo lifushane futhi libushelelezi, okwenza kube lula kakhulu ukuligcina.
Ama-mini French Bulldog dos adinga ukuzilungisa (nokugeza) ukuqinisekisa ukuthi ijazi nesikhumba sawo sigcinwa siphilile, noma kunjalo, lokhu kulula kakhulu ngenxa yobukhulu bawo obuncane.
Ukunakekelwa kahle kwezipikili kanye ukunakekelwa kwamazinyo nakho kubalulekile . Zama ukujwayeza injana yakho ukuthintwa imilomo nezinzwane kusukela isencane (lokhu kuzokwenza ukuzilungisa kwesisekelo kube lula kakhulu)
Ngenxa yejazi labo elilodwa, iBulldog encane yaseFrance ayisiyona ishede enkulu, kepha lokhu akulona uhlobo lwe-hypoallergenic ; zinoboya obufushane nje.
Kuyizidingo zabo zokuzilungisa ezihlanganiswe nezidingo zabo zokuzivocavoca okuncane okwenza lolu hlobo luphelele kumnikazi wenja “okhululekile”.
Le nja akuyona uhlobo olusemthethweni lwezinja.
Izinhlobonhlobo ezincane zeFulldog yaseFrance ayaziwa ngokusemthethweni yi-American Kennel Club.
Miniaturizing izinhlobo ezithandwayo ikhula ngokushesha ekuthandeni ngenxa yezidingo zabo zokunakekelwa okuncane, ukubukeka okuhle nokuthwala.
Ukuzalisa ama-Bulldogs ama-French miniaturised kungenzeka ngezindlela ezintathu ezihlukene:
Ukuzalelwa Kwama-Litter Runts
Ukuzalelwa kwe-mini French Bulldog kungenzeka ngokuzalaniswa kwe- 'litter runts'. Yonke imfucumfucu ine-runt, lokhu kungumdlwane omncane kakhulu kudoti.
Ukuze kuzalwe amaFrenchies amancane, kwesinye isikhathi ama-runt akhishwa kudoti ahlanganiswe ndawonye ngethemba lokuthi ubukhulu bawo buzothwala imidlwane yawo.
Ngeshwa, ukuzalanisa ama-runts kadoti kungahle kube nezingozi zempilo .
Ukuzalela Kwesiphambano Nezinja Zokudlala
Enye indlela lapho ama-Bulldogs amaFrench amancane akhuliswa ngayo avela ekuzalelaneni okweqile komzali osezingeni elilinganiselwe nge uhlobo oluthile lwezinja .
Lokhu kungasho ukuthi i-Frenchie yakho ilahlekelwa isimo sayo se- 'pure bred', kepha kungaba yindlela engcono kakhulu maqondana nempilo yabo.
Eqinisweni, ukuzalanisa okuphambene kuye kwaziwa ukuthi kuqeda izinkinga zempilo ezidluliselwe kubazali abahlanzekile (isib. Isifonyo sabo esifushane).
Kubalulekile ukwazi umfuyi wakho futhi ucwaninge ubumnene bolunye uhlobo kulesi simo.
I-dwarfism inguquko lokho kungenzeka ekwakhiweni kofuzo kweFulldog yaseFrance.
Lokhu kubangela iBulldog encane yaseFrance enokukhula okulinganiselwe nezitho ezifinyeziwe.
Abazalanisi kwesinye isikhathi bazama ukwenza inzuzo ngalokhu kukhubazeka kofuzo ngokuthola amanye amaFrenchies anokukhubazeka okufanayo kofuzo bese ebazala ngethemba lokuthi ubufushane be-canine nabo buzovela ngaphakathi kukadoti.
Kepha, njengoba kuyisifo samathambo, ukufiphala okuncane kungaholela ezinhlungwini ezingapheli kumdlwane.
Lapho unakho; Izinto eziyi-10 wonke umthandi wezinja okufanele azi nge-mini French Bulldog .
Uhlobo olwenzelwe ubungani, uthando nobuhle; akunzima ukuthandana nalolu hlobo oluncane losayizi.
Inenkani encane, inesithukuthezi futhi ifuna ngenkani, kepha igcwele uthando, ukwethembeka kanye nogqozi, lokhu kuzala ubuntu bokuhamba kalula nokuzivumelanisa nezimo okuphezulu kubenza babe ngumlingani ophelele wabo bobabili abahlala ezweni nasemadolobheni.
Yini oyithathayo? Sazise ngezansi!
Umalusi waseJalimane: Yonke Into Abanikazi Abasha Okufanele Bayazi
Imininingwane kaPitbull Husky Mix: Konke Mayelana nePitsky
igolide retriever cross cocker spaniel
ingakanani inja yokufundisa ngomalta
izithombe ze-rottweiler lab mix
umalusi omncane waseJalimane okhule ngokugcwele